Olee otú iji na-azọpụta akwụkwọ iCloud
Na ntọhapụ nke iCloud otu onye anaghị kwesịrị ịna-ya akwụkwọ ya laptọọpụ ma ọ bụ kọmputa nchekwa na faịlụ. Ị na-adịghị ọbụna-enwe nchegbu banyere ebe i zọpụta gị akwụkwọ na-aga na-achọ mgbe e mesịrị. Ngwa nke na-akwado na iCloud akwụkwọ nchekwa, a onye kwesịrị icheta dị nnọọ ngwa nke ga-emepe dị otú ahụ faịlụ. Na ike nke ihe ga-jisiri site iCloud, ọ ga-na-esochi nke mgbanwe echekwara na akwụkwọ na mgbe ọ bụla ngwaọrụ nke a na ite ke na akaụntụ gị ga-abụ na-Ịma Ọkwa. iCloud nwere ike ịzọpụta gị ihe oyiyi, PDFs, spreadsheets, n'ihu na dị iche iche ụdị akwụkwọ. Na akwụkwọ ndị a mgbe ahụ nwere ike-enweta site na nke ọ bụla n'ime iOS ngwaọrụ. Ọ na-arụ ọrụ maka iOS 9 ma ọ bụ Mac kọmputa nakwa nke nwere OS X El Capitan na maka kọmputa nwere windows dị ka mma. Na iCloud Drive bụla ego n'anya haziri na nchekwa, dị nnọọ ka na Mac kọmputa. Ole na ole nchekwa na-mere na-akpaghị aka maka ngwa nke na-akwado iCloud Drive maka iWork ngwa (peeji nke, Ọnụ Ọgụgụ, na keynote).
Otú e si enyere akwụkwọ na iCloud na gị iOS ngwaọrụ
Iji gbanye akwụkwọ ndabere na gị iPhone, iPod ma ọ bụ iPad nanị na-eso nzọụkwụ n'okpuru:
1. On gị iPad ma ọ bụ iPhone aga n'ụlọ gị gị na ihuenyo na enweta "Ntọala";
2. enweta "iCloud";
3. Kpatụ Documents & Data;
4. Kwado nhọrọ nke na-ekwu Documents & Data emi odude ke n'elu;
5. Ebe a, ị nwere nhọrọ aka nke ngwa nwere ike ime ka ndabere nke data na dọkụmentị na ígwé ojii, dị ka e gosiri n'elu.
Otú e si enyere akwụkwọ na iCloud na Mac kọmputa.
Nke a na-ewere dị ka ihe dị mkpa update maka ma Documents na Data. Mgbe ị na-imelite onwe gị iCloud Drive na Mac ngwaọrụ, gị data na akwụkwọ na-depụtaghachiri na-akpaghị aka na iCloud Drive na Ha na-ahụ dị na ngwaọrụ nke nwere iCloud mbanye. Iji nke a mma na gị Mac kọmputa, na-eso nzọụkwụ n'okpuru:
1. Click on Apple wee pịa System Mmasị
2. Site n'ebe pịa iCloud
3. Kwado ndị iCloud Drive
Ebe ị ga-jụrụ na-ekweta na-egosi na ị dị njikere imelite ị iCloud akaụntụ ka iCloud Drive si Documents na Data, na ọ ga-nyeere.
Ọ bụrụ na ị bụ onye iOS9 onye ọrụ, ị nwekwara ike nweta nkwalite akwụkwọ iCloud ka iCloud mbanye. iCloud Drive bụ Apple ọhụrụ ngwọta maka akwụkwọ nchekwa na mmekọrịta. Na iCloud Drive, ị nwere ike n'enweghị ịzọpụta, dezie na ịkọrọ gị n'ihu, speadsheets, ihe oyiyi, wdg na iCloud ma nweta ha niile na iDevices.
Kwado iCloud Drive on iOS ngwaọrụ.
1. enweta na na ntọala gị na iPhonse ma ọ bụ iPad na-agba ọsọ iOS 9 ma ọ bụ mgbe e mesịrị.
2. enweta na iCloud.
3. enweta na iCloud Drive agbanye iCloud Drive ọrụ.
Kwado iCloud Drive on Yosemite Mac.
iCloud Drive abịa tinyere na ọhụrụ OS Yosemite. Open System Mmasị na gị Mac, pịa iCloud Drive na ekpe panel na-atụgharị ya. I nwekwara ike pịa Nhọrọ ịhụ ihe App data na-echekwara ka iCloud mbanye.
Rịba ama: iCloud Drive na-arụ ọrụ na iOS 9 na OS X El Capitan. Ọ bụrụ na ị ka nwere ngwaọrụ-agba ọsọ okenye iOS ma ọ bụ OS nsụgharị, i kwesịrị eche echiche ugboro abụọ tupu upgrading ka iCloud Drive, ma ị ga-ezute mbipụta ka mmekọrịta gị akwụkwọ na niile Apple ngwaọrụ.
> Resource> iCloud> otú iji na-Zọpụta Documents na iCloud